दुई तिहाईको सरकार दुई कौडीको छैन् : राजेन्द्र महतो | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more दुई तिहाईको सरकार दुई कौडीको छैन् : राजेन्द्र महतो
दुई तिहाईको सरकार दुई कौडीको छैन् : राजेन्द्र महतो
बैशाख २६ गते, २०७७ - १७:३१
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद राजेन्द्र महतोले वर्तमान सरकार दुई तिहाई बहुमतको सरकार नभएर दुई कोडीको पनि नभएको टिप्पणी गरेका छन् । संसद्को छैठौं अधिवेशनको पहिलो दिन प्रतिनिधि सभामा बोल्दै महतोले सरकारले कुर्सीको लडाईं गर्न मात्र सिपालु भएको आरोप लगाए ।
वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा काम नगरेको उनको आरोप छ । ‘जनता महामारीबाट पीडित छ, खान पाएको छैन, स्वास्थ्यकर्मीले सामग्री पाएको छैन,’ महतोले भने, ‘सरकार अर्कै धन्दामा लागेको छ । पार्टी फोर्ने, सांसद चोर्ने धन्दा के हो ? यसले जनताको पीडा कम हुन्छ ? अपहरणकारीलाई कारवाही गरिदेऊ भनेर जाँदा जाहेरी नलिने ! यो हुकुमी शासन कहिले आयो ?’
उनले सरकार अर्काको पार्टी फुटाउने धन्दामा लागेको आरोप लगाए । ‘अपहरण गर्ने धन्दामा सरकार लाग्यो । कुर्सी जोगाउने धन्दामा सरकार लागेको छ,’ उनले भने, ‘जनतासँग सरोकार राख्नुपर्दैन ? यस्तै संकट परेको बेलामा जनताले सरकारबाट सुरक्षा खोजेको हुन्छ । यो संकटको बेलामा पनि सरकारको काम नदेखिएपछि के काम ?’
सांसद महतोले शक्तिशाली देश अमेरिका र अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरु समेत कोरोनाको महामारीमा निरीह बनेको भन्दै नेपालजस्तो देशले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने बताए।
‘महामारीबाट जनतालाई जोगाउ भन्ने मेरो एउटा मात्रै माग हो’, उनले भने, ‘हाम्रा लाखौँ जनता विदेशमा छन्, संकटको बेला उसको रोजगारी खोसिएको छ, ऊ नेपाल फर्कन चाहन्छ। यो अवस्थामा सरकारले के गरिरहेको छ ? सरकारले योजना बनाउनु पर्दन, आफ्नोृ मातृभूमि पनि फर्कंन नपाउने ?’
बैशाख २६ गते, २०७७ - १७:३१ मा प्रकाशित